Mayelana nathi - Linyi Mingding International Trade Co., LTD
I-Linyi Mingding International Trade Co., LTD, inkampani ephethwe yiLinyi Mingding Group, engenye yabaphakeli abasebenza kakhulu ngokhuni nabasebenza ngemikhiqizo yezinkuni eChina, yasungulwa ngonyaka we-2011. Ngale minyaka yale minyaka yentuthuko, sisungulwe uhlelo yokukhiqiza, ukuthengisa futhi emva-ukudayiswa-service.
Imikhiqizo yethu eyinhloko imishini esebenza ngokhuni efana ne-log debarker, umshini wokuxubha izinkuni, isitaki se-veneer, i-grinder yommese, isarha yokunquma onqenqemeni, umqambi oyisisekelo nomshini oshisayo kanye nezixazululo zomugqa wokukhiqiza njll. , OSB njll.
Phakathi nale minyaka, sithole ukuncoma okuningi kakhulu kumakhasimende ethu. Lokhu kuyinhlonipho yethu enkulu ukusiza amakhasimende ethu ukuxazulula izinkinga zawo.
Amazwe ayi-100 + athunyelwe kwamanye amazwe
Iminyaka eyi-10 yokukhiqiza nokuthengisa isipiliyoni
Umphakeli ophezulu wemishini nemikhiqizo yezinkuni eChina
Ithimba lethu lonke kufaka phakathi insizakalo yokuthengisa kanye nangemva kokuthengisa izogcina uthando lwethu lokwenza wonke amakhasimende aneliseke.Sizuze ukwethembela okukhulu kumakhasimende ethu, lapho ehlangabezana nezinkinga ezithile kule nsimu yezinkuni, akunandaba emishinini noma emikhiqizweni yezinkuni , bayakujabulela ukuthola iziphakamiso noma ukunikezwa kithi. Lokhu kuwumgomo wethu futhi: Uma sesibe amakhasimende ethu, sizoba abangane abahle kuze kube phakade.
Sisebenzisa ngokuphelele uhlelo lwekhwalithi le-ISO9001 futhi sisebenzisa ngokuqinile ukuhlolwa ezintathu ekukhiqizeni, okungukuthi ukuhlolwa kwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kwenqubo, nokuhlolwa kwemboni; Isethi ngayinye yomshini esiyilayisha kumakhasimende idinga ukudlulisa ukuhlolwa kwecala efektri yethu. Noma iyiphi inkinga kufanele ixazululwe ngaphambi kokulayisha. Lo mthetho oqinile usisizile ekwenzeni ukuthi ikhasimende ngalinye lineliseke ngomshini esiwuthumele kuwo. Yonke imikhiqizo ikhiqizwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi kanye namazinga afanele kazwelonke, futhi yenziwa ngezinto zokusetshenziswa ezifanelekile nobuchwepheshe obuthuthukisiwe ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo, ukucaciswa nokusebenza kuyahambisana nezidingo zomsebenzisi.
Sinezinye izinhlaka emazweni ahlukene, ezenza imishini yethu nemikhiqizo yethu isondele kakhulu kumakhasimende okugcina. Lokhu kuqinisekisa abasebenzisi bethu bokugcina ukuthi bathole insizakalo ngemuva kokuthengisa ngesikhathi. Ngeke sikulahle ngoba ukhetha ukuthi sibe nguzakwethu ebhizinisini lakho. Ufisa ukwenza inqubekela phambili eyengeziwe nawe ndawonye.